Mojácar, ebe mara mma na Almería | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Almería, Ihe ị ga-ahụ
Mgbe ị na-elele maapụ ị ga-ahụ na Spain bụ obere mba, ọ bụ ya mere o ji magbuo onwe ya ma ị chọpụta ọtụtụ mbara ala, ọdịbendị, akụkọ na gastronomies dị na ya. N'ime obodo kwụ ọtọ nke Andalusia bụ Almería, obodo ochie nke Abderramán II hiwere, emir na caliph hiwere na 955 AD
Ọ bụrụ na anyị chere na site na mgbe ahụ ruo afọ 1489 ọ dị n'aka ndị Arab mgbe ahụ akụ na ụba ọdịbendị nke dị na ya ga-abụ nnukwu. Omenala, nri, ala na nkuku nke ugbua ihu igwe di nma na ebido nke oma anyi g’enwe obi uto. Dịka ọmụmaatụ, chere anyị Mojacar.
2 Ihe ị ga-eme na Mojácar
3 Osimiri Mojácar
Ọ bụ nnukwu ebe ezumike, obodo mara mma nke etinyere n'ụsọ oké osimiri, na ọkwa dị iche iche n'akụkụ akụkụ ugwu. Ọ dị ka acha ọcha ụlọ postkaadị gbasasịa na otu iwu n'elu Sierra Cabrera.
Mojácar dị ihe na-erughị otu elekere site na ọdụ ụgbọ elu Almería ma n'ihi ọnọdụ ya kachasị mma ọ bụ ebe dị mma maka njem. You na-eme atụmatụ imefu ole na ole ezumike dika di na nwunye ma obu dika ezin’ulo? Ọfọn, Mojácar bụ nnukwu ebe, na-amalite site na ya ọmarịcha obodo ochie.
Obodo ochie ahụ bụ netwọk nke n'okporo ámá ndị a gbara agba na-ejigide ikuku Moor tupu mmeri Ndị Kraịst nke mpaghara ahụ. Ihe agbakwunyere na nke a bụ njirimara nke oke ala ya nyere ya site na narị afọ nke iri na isii ruo na ngwụsị narị afọ nke iri na asatọ, oge Ndị Kraịst nọ ebe a na-alụ ọgụ megide ndị ohi North Africa na ndị ohi.
Akụkọ ihe mere eme nke ndị mmadụ n'oge ochie abụghị akwa akwa akwa Mojácar nwere ihe otiti, agha, ọkọchị yana ụfọdụ oge bara ọgaranya site na ịchọta ọlaọcha na ugwu Almagrera. Ugbua na narị afọ nke iri abụọ, ọpụpụ malitere na n'oge ahụ, ana m ekwupụta, nne na nna m ochie gara Argentina dịka ọtụtụ ndị agbata obi ndị ọzọ. Spain na 60 abụghị mba nke taa, yabụ Mojácar enweghị ọkụ eletrik ma ọ bụ mmiri pọmpụ ma ọ bụ ekwentị n’oge ahụ.
O nweghi aro na n'ime iri afọ ole na ole ọ ga-abụ ebe njem maka njem nlegharị anya nke ụlọ na nke mba. Mana nke a bụ ihe mere mgbe onye isi obodo bidoro ịnye ndị ochie chọrọ ụlọ ndị mebiri emebi: ndị nta akụkọ, ndị omenkà na ndị bohemian bịara nwee ọ enjoyụ obodo dara ogbenye mana ka mara mma nwere ọtụtụ ikike.
Ya mere, Mojácar nwuru ọzọ.
Ihe ị ga-eme na Mojácar
Ọfọn, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịga ije ebe niile. Ọ bụ obodo nwere ike iji ụkwụ hụ n'ihi ya, ị na-anụ ụtọ ụda ya, echiche ya, n'okporo ámá ya. Site na eserese nke ndị enyere na ebe njem nleta ị nwere ụzọ gasị n'aka. Na-amalite isi mmiri dị na ntọala obodo ahụ wee nwee ike ịkwụsị na nlele anya panoramic na elu.
Ebee ka ị ga-esi nweta maapụ na ozi ndị ọzọ? E nwere a Njem Nleta Center na osimiri, dị n'ihu Commercial Park na onye ọzọ na obodo na bụ na square na-esote ụlọ elu ụlọ ụka. Ọ bụrụ na ị nọ n'ụgbọala, ana m adọ gị aka na ntị na a na-adọba ụgbọala adịghị n’obodo, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-aga na elu oge. E nwere naanị otu ụzọ mbata na ị nwere ike ịchọta ebe a na-adọba ụgbọala ihe dị ka 300 mita mgbe ị gafesịrị Plaza Nueva.
Ala ala nke obodo bu uzo uzo na ebe mmalite njem obula ma obu njem obula. Na mgbakwunye, ọ bụ mpaghara ahụ ụtụtụ, ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ihe onyinye. Site ebe a na-arịgo ụzọ gbagoro n'ugwu ahụ, n'akụkụ akụkụ nke obodo ahụ, ma ọ bụ na ịnweghị ike ịrịgo ma nọrọ ala. Fuente de Moro dị ala ebe a na oge Moorish ọ bụ obi nke ebe ahụ.
Mmiri ahụ ka na-a drinkụ ya n'ihi ya, ọ bụ ndị njem nleta ma ọ bụ ndị bi n'obodo na-agbanye karama ha ebe a. Aregbọ mmiri iri na abụọ dị n’elu ha, e dere ihe ncheta Mojácar n’elu ha. Na Ọnụ Cityzọ Citymá Obodo ma ọ bụ Puerta de la Almedina Narị afọ nke XNUMX, ụlọ nke Council nke Mojácar, obere square ya na cafes, warara steepụ nke na-agbadata na Ogige Parterre, jupụtara na okooko osisi na Chọọchị Santa Maria, na-esote ya, na ọdịdị ahụ dị egwu.
Ga-ahụkwa ihe oyiyi nke Mojáqueras, n'ihu ọnụ ụzọ ụlọ ụka ahụ. Ọ bụ ihe ncheta marble na-anọchite anya nwanyị Mojácar na-ebu mmiri na ụdị ejiji ya. Dị nso bụ Ogige Fronton na Ogige Ọhụrụ nke bụ isi square nke obodo na-emepe n'ime cobbled alleys na Ogwe, kafe na ndị ọzọ ụlọ ahịa.
Lee ị gaghị echefu ya Echiche nke New Square, a n'elu ikpo okwu emi odude ke kiet ke otu awade ebube panoramic echiche nke ndagwurugwu. Ọzọ bụ Elele ọ bụ ezie na ọ na-achọ a nkpoda ịrị elu karịa cobblestone n'okporo ámá. Ma ee, site ebe a ị nwere ike ịhụ n'ụsọ oké osimiri na Oké Osimiri Mediterenian. Ndị a bụ ihe atụ, mana zuo ya ịsị na iji maapụ dị n’aka ị nwere ike ịbịa ma laa, belata ụzọ, gbagoo ma gbadata ebe niile.
Site n'obodo nta n'onwe ya, na-agbada ugwu ahụ ọkara awa ma ọ bụ jiri ụgbọ ala na obere njem nke naanị nkeji ise, ị rutere mpaghara ala gbara osimiri okirikiri ya na osimiri ya na họtel ya. Osimiri Mojácar na-arụ ọrụ na oge ọkọchị na ya ụlọ oriri na ọ barsụ andụ na ụlọ mmanya na ụlọ oriri na nkwari abalị, mgbe anyanwụ dara.
Osimiri ndị ọzọ dị ezigbo nso ma ụgbọ ala nwere ike iru ha niile. Enwere arụ ọrụ ụgbọ ala mgbe niile na-aga n'okporo ụzọ awara awara nke dị n'ụsọ oké osimiri na-enye ohere ịnweta osimiri ma ị nwekwara ike isonyere ha site n'ije ije. Enwere Osimiri Marina de la Torre, La Rumina, Del Uncharger, Palmeral, Piedra Villazar, Vista de los Ángeles, Cantal, Cueva del Lobo, Las Ventanicas ma ọ bụ Venta del Bancal, dịka ọmụmaatụ.
Ha niile na-enye ohere, anyanwụ, oké osimiri, egwuregwu mmiri… Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị ikuku ma ọ bụ kitesurfing mgbe ahụ ndị kachasị mma bụ osimiri La Rumina na El Palmeral, nke dị n'ebe ugwu. Maka ọnụ mmiri dị jụụ na obere mmepe ị nwere ike ịkwado ndị nke Discharger na Piedra Villazar. La del Cantal na-ewu ewu ma nwee ọtụtụ ogwe osimiri, dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ọ maara nke ọma.
Chọrọ osimiri fọrọ nke nta ka ehichapụ site na njem nleta ma ọ bụ a gba ọtọ osimiri? Mgbe ahụ ị ga-gaba kwupụta Castillo de Macenas beach, Sombrerico beach ma ọ bụ osimiri Granatilla. Ha bụ ụsọ osimiri dị na ala nke Sierra Cabrera, ugwu mgbawa, na-enweghị ọtụtụ ọrụ mana maka nke ahụ, ọ dị jụụ. A obere akụkọ ihe mere eme na ezi gastronomy seasoned na oké echiche na oké osimiri, i nwere ike ime ka a n'oge okpomọkụ 2017 a oké okpomọkụ, adịghị ị na-eche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Almería » Mojácar, ebe mara mma na Almería
7 nke kacha mma osimiri na ndịda Italy